Fifandonana tamin’ny dahalo : Zandary telo namoy ny ainy -
AccueilSongandinaFifandonana tamin’ny dahalo : Zandary telo namoy ny ainy
Fifandonana tamin’ny dahalo : Zandary telo namoy ny ainy
Zandary miisa telo avy any amin’ny borigady Antanimora Atsimo, borigady Beloha ary avy any amin’ny PA Marotsialeha no indray namoy ny ainy vokatry ny asan-dahalo niseho tany amin’ny distrikan’Ambovombe, faritra Androy sy distrikan’Ambatomainty , faritr’i Melaky ny 01 aprily lasa teo. Araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia nandritra ny fanarahan-dia nataon’ireo mpitandro filaminana sy ireo fokonolona no namelezan’ireo olon-dratsy ireto farany tamin’ny alalan’ny tifitra variraraka. Tany amin’ny fokontany Andranovola, kaominina Imanombo, distrikan’Ambovombe no namoizana ireo zandary roa voalohany tamin’io andro io, tokony ho tamin’ny 01 ora tolakandro . Rehefa nahazo antso avy any amin’ireo mponina notafihan’ny dahalo manodidina ny 30 isa mantsy izy ireo, dia nandray ny andraikiny avy hatrany tamin’ny fanenjehana ireo olon-dratsy izay naka an-keriny mpivady sy nandroba omby miisa 10 teny am-pitsoahana. Ny tifitr’ireo andian’olon-dratsy izay efa tsara fiomanana anefa no tonga aloha ka izao namoizana zandary roalahy izao. Raha ny voalaza, dia nisy lehilahy iray hafa isan’ireo mpanara-dia ihany koa no lavon’izy ireo tamin’io fotoana io.
Marihina fa efa navotsotr’ireo dahalo moa olona nalaina an-keriny raha toa ka lasan’izy ireo ny omby. Zandary mpiana-draharaha ao amin’ny amin’ny PA Marotsialeha kosa no fanintelony namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny asany tamin’io voalohan’ny volana aprily io, tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Araka ny loharanom-baovao hatrany, dia dahalo miisa 30 nirongo basim-borona ihany koa no nanafika tao amin’ny fokontany Ambonarabe, kaominina Makaraingo, distrikan’Ambatomainty ny alin’ny 31 martsa hifoha ny 01 aprily. Voaroba tamin’izany ny omby miisa 500, ka tsy niandry ela fa niroso avy hatrany tamin’ny fanarahan-dia ireo manam-pahefana niaraka tamin’ireo fokonolona. Raikitra ny fifandonana voalohany teo amin’ny fokontany Tsinjorano, ka maty vokatry ny tifitra niantefa teny aminy io zandary io sy ny olona iray hafa isan’ireo mpanara-dia. Nitari-dositra nitsoaka niaraka tamin’ireo omby marobe ireo olon-dratsy taorian’izay. Tsy nijanona hatreo anefa ny fanenjehana ireo dahalo, ary mora foana ny nahatrarana ireto farany izay efa notsenain’ny fanakanan-dalana nataona zandary hafa, ka raikitra indray ny fifanjevoana. Tamin’izany no nahalavoana dahalo 02 sy naharatrana 03 hafa. Efa tafaverina any amin’ny tompony kosa ireo omby 500 nangalarina.